Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka oo ku baaqay in lagu laabto doorashada kuraasta khilaafku uu wali ka taagan yahay ee Baarlamaanka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka oo ku baaqay in lagu laabto doorashada...
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka oo ku baaqay in lagu laabto doorashada kuraasta khilaafku uu wali ka taagan yahay ee Baarlamaanka
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir oo markii ugu horeysay ka hadlay kuraasta baarlamaanka ee wali leysku hayo ayaa sheegay in dib loogu laabto doorashada 8 da Kursi ee maxkamada sare go’aanka ka soo saartay.
Xeer ilaaliyaha ayaa tilmaamay in aysan macquul aheyn in aan la dhaqan gelin oo aan la dhageysan go’aanada muhiimka ah ee ka soo baxa maxkamada sare ee dalka.
“ Waxaan taageerayaa go’aanka maxkamada sare ka soo baxay anaga ma dooneyno in aan u kala safano xildhibaanada baarlamaanka balse waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo cadaaladda oo dib doorasho xalaal ah loogu celiyo kuraasta aan saxneyn ee baarlamaanka ku jira “ayuu yiri xeer Ilaaliyaha Qaranka”.
Waxaa uu sheegay in baarlamaanka laga doonayo hada in ay si shuruud la’aan ah ku fuliyaan go’aanka ka soo baxay Maxkamada Sare ee dalka isla markaana ay sharciga ilaaliyaan.
Previous articleGuddi loo saaray qasaarihii ka dhashay maqnaanshihii Internet-ka
Next articleAskari Soomali ah oo ka tirsan booliska Maraykanka oo dilay haweenay u dhalatay Australia